မြန်မာ-နယူးဇီလန် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ဆိုင်ရာ အစီအစဉ်ဖြင့် လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင် ဝန်ကြီးဌာနမှ အင်ဂျင်နီယာ အရာထမ်းများအတွက် ဖွင့်လှစ်သည့် “Grid Integration and Distributed Generation”သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်
မြန်မာ-နယူးဇီလန် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ဆိုင်ရာ အစီအစဉ်ဖြင့် လျှပ်စစ် နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ အင်ဂျင်နီယာအရာထမ်းဝန်ထမ်းများအတွက် ဖွင့်လှစ်သည့် Grid Integration and Distributed Generation သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၉) ရက်၊ နံနက် (၀၉:၀၀) နာရီတွင် လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၂၇)၊ ရတနာခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ဓာတ်အားစနစ်မှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်မှုအချိုး (Electrification Ratio) ၅၅% သို့ တိုးတက်စေရေးကို အထောက်အကူပြုမည့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ချေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၃၁၀ ဖြင့် ဆောင်ရွက်နေသည့် (National Electrification Plan- NEP)
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင်သည် တာဝန်ရှိသူများ လိုက်ပါလျက် ကမ္ဘာ့ဘဏ်ချေးငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်နေသည့် အမျိုးသားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရေးစီမံကိန်းမှ ပထမအဆင့်စာရင်းပါ ကျေးရွာ (၅၀၈၀) ရွာအတွက် လိုအပ်သည့် ထရန်စဖော်မာ (၅၃၈၉) လုံးကို ထုတ်လုပ် စမ်းသပ်နေသည့် ရန်ကုန်မြို့၊ တောင်ဒဂုံ စက်မှုဇုန်ရှိ ဂျပန်နိုင်ငံ Hitachi ကုမ္ပဏီနှင့် ဖက်စပ်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေသော Hitachi Soe Electric & Machinery Co.,Ltd. စက်ရုံသို့ သွားရောက်ပြီး ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည့် ထရန်စဖော်မာများ စမ်းသပ်နေမှု အခြေအနေအား သွားရောက်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးရာ Hitachi Soe Electric & Machinery Co.,Ltd. ၏ Chairman ဦးကျော်မင်းထွန်းနှင့် Managing Director Mr. Katsutoshi Inagaki တို့မှ ရှင်းလင်းတင်ပြကြပြီး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ လိုအပ်သည်များကို မှာကြားခဲ့ ပါသည်။